Articles – Cele News TV
January 21, 2022 100million 0
ဘဝမွာ အႀကီးမားဆုံး ေလာကဓံကိုႀကဳံခဲ့ရၿပီးေနာက္ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ရင္ဖြင့္ေျပာျပလာတဲ့ နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္း… The post ဘဝမွာ အႀကီးမားဆုံး ေလာကဓံကိုႀကဳံခဲ့ရၿပီးေနာက္ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ရင္ဖြင့္ေျပာျပလာတဲ့ နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္း… appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
မေတင်မောင်ဆန်းဝင်း ဟာဆိုရင် ရွှေမန်းသဘင်မှ တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်း ရဲ့ ညီမဖြစ်သလို မင်းသမီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မေတင်မောင်ဆန်းဝင်းဟာ အာရုံကြော ထိခိုက်မှုကြောင့် ဆေးရုံမှာတက်ရောက်ကုသနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ ဆေးရုံ တက်ရောက်နေရင်း စိတ်ဓာတ်အရမ်း ကျခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်း သွားလာလို့ မရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆရာမ တွေနဲ့ အတူတူထားရပါတယ်။ […]
လႉဒါန္းေပးခဲ့တဲ့ ေျခတုေလးနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ ေဆာ့ကစားေနတဲ့ ကေလးေလးကို ၾကည့္ၿပီးဝမ္းသာပီတိျဖစ္ေနတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝရဲ႕ ဗီဒီယို… The post လႉဒါန္းေပးခဲ့တဲ့ ေျခတုေလးနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ ေဆာ့ကစားေနတဲ့ ကေလးေလးကို ၾကည့္ၿပီးဝမ္းသာပီတိျဖစ္ေနတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝရဲ႕ ဗီဒီယို… appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
ဒီေန႔ေလးမွာ အသက္ (၅၈) ႏွစ္ ျပည့္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ Rock ဘုရင္ႀကီး ေဇာ္ဝင္းထြဋ္…
ဒီေန႔ေလးမွာ အသက္ (၅၈) ႏွစ္ ျပည့္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ Rock ဘုရင္ႀကီး ေဇာ္ဝင္းထြဋ္… The post ဒီေန႔ေလးမွာ အသက္ (၅၈) ႏွစ္ ျပည့္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ Rock ဘုရင္ႀကီး ေဇာ္ဝင္းထြဋ္… appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
ဇာတ္လမ္းထဲကလို မတူကြဲျပားတဲ့ ခပ္လန္းလန္းဓာတ္ပုံေတြကို တင္ေပးလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းဘုန္းျမတ္…
ဇာတ္လမ္းထဲကလို မတူကြဲျပားတဲ့ ခပ္လန္းလန္းဓာတ္ပုံေတြကို တင္ေပးလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းဘုန္းျမတ္… The post ဇာတ္လမ္းထဲကလို မတူကြဲျပားတဲ့ ခပ္လန္းလန္းဓာတ္ပုံေတြကို တင္ေပးလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းဘုန္းျမတ္… appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
ခြေတုလေးနဲ့ အဆင်ပြေပြေလမ်းလျှောက်ကာ ဆော့ကစား နေတဲ့ ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ဗီဒီယို
ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူတွေကို နေ့တိုင်း ပံ့ပိုးကူညီပေးနေပြီး စားသောက် ကုန်တွေကိုလည်း ရက်ရက်ရောရော လှူဒါန်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ သားသမီးလေးတွေကိုလည်း အလုပ်တွေ မအားလပ်တဲ့ ကြားကနေမှ အချိန်ပေးကာ မိခင်ရင်းသဖွယ် ကြင်နာစောင့်ရှောက်မှုတွေကို လုပ်ပေးတတ်ပါသေးတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဆေးကုသဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ […]
မထင်မှတ်ထားတဲ့ အကြီးဆုံးလောကဓံကို ကြုံပြီးနောက် ဘာမဆိုရင်ဆိုင်ရုံပဲလို့တွေးတတ်သွားတယ် လို့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ တဲ့ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နန်းမြတ်ကတော့ လက်ရှိမှာ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ သားလေးနဲ့ သမီးလေးအတွက် လောကကြီးကို ရဲရင့်စွာရင်ဆိုင်နေတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ နန်းမြတ်ကလည်း အခုလို မထင်မှတ်ထားတဲ့ လောကဓံကိုကြုံတွေ့ရပြီးနောက် ဘာမဆို ရင်ဆိုင်ရုံပဲဆိုတဲ့ စိတ်ထားတတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ လက်ရှိအခြေနေမှာ […]
လူ႐ႊင္ေတာ္ ပိုးေလးရဲ႕ ေမြးေန႔ေလးကို မရွိရွိတာေလးနဲ႔ Surprise ေလးလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ဟားငါးေကာင္ အဖြဲ႕သားေတြရဲ႕ ၾကည္ႏူးစရာ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလး…
လူ႐ႊင္ေတာ္ ပိုးေလးရဲ႕ ေမြးေန႔ေလးကို မရွိရွိတာေလးနဲ႔ Surprise ေလးလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ဟားငါးေကာင္ အဖြဲ႕သားေတြရဲ႕ ၾကည္ႏူးစရာ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလး… The post လူ႐ႊင္ေတာ္ ပိုးေလးရဲ႕ ေမြးေန႔ေလးကို မရွိရွိတာေလးနဲ႔ Surprise ေလးလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ဟားငါးေကာင္ အဖြဲ႕သားေတြရဲ႕ ၾကည္ႏူးစရာ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလး… appeared first on […]
ေရကူးကန္အထက္မွာ ရင္ခုန္စရာ အလွတရားေတြနဲ႔ ပို႔စ္ေတြမ်ိဳးစုံေပးကာ အျပတ္လန္းေနတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္…
January 20, 2022 100million 0
ေရကူးကန္အထက္မွာ ရင္ခုန္စရာ အလွတရားေတြနဲ႔ ပို႔စ္ေတြမ်ိဳးစုံေပးကာ အျပတ္လန္းေနတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္… The post ေရကူးကန္အထက္မွာ ရင္ခုန္စရာ အလွတရားေတြနဲ႔ ပို႔စ္ေတြမ်ိဳးစုံေပးကာ အျပတ္လန္းေနတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္… appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
ဆိုင်ကယ်လာခိုးသည့်သူခိုးနှင့် နပမ်းလုံးနေသောခင်ပွန်းကို ကူညီရန်ဓားမဆွဲပြီးပြေးထွက်လာသည့် ကိုယ်ဝန်၅လဖြင့်ဇနီးသည်
အလွန်စိတ်ညစ်ဖွယ်ကောင်းလှသော မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကို ကျူးလွန်နေသူများဟာ နေရာဒေသအသီးသီးတွင် ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ မစ္စတာငုယင်ဗန်ဆွန်နှင့်ဇနီးသည်တို့နေထိုင်၏ အိမ်ဝိုင်းထဲသို့ သူခိုးတစ်ဦးဟာ ဝင်ရောက်ပြီးဆိုင်ကယ်ကိုခိုးယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူခိုးတွေဟာ ခြံတံခါးကိုဖျက်ဆီးပြီး ဆိုင်ကယ်ကိုယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအချိန်တွင် အိမ်ရှင်အမျိုးသားကသိသွားခဲ့ပြီး အမြန်ပြေးကာ သူခိုးကို ဖမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။သို့သော်သူခိုးက အဖော်လာလာခဲ့တာဖြစ်သည်ြအတွက် အမျိုးသားက တစ်ဦးတည်းဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်၅လဖြင့်ဇနီးသည်ဟာ ခင်ပွန်းကို ကူညီဖို့ […]